Soomaali laga xiray dukaamo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan dalka Koonfur Africa. – SBC
Soomaali laga xiray dukaamo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan dalka Koonfur Africa.
Ganacsato Soomaali ah ayaa mar kale laga xiray dukaamo ay ku lahaayeen deegaanka Swellendom ee gobolkan Western Cape ka dib markii la ogaaday inaysan leheyn licence-ka ganacsiga oo lagu aqoonsado in shaqsiga ganacsadaha ah ganacsigiisa uu u heysto ogolaansho.
Sida aynu wararka ku heleyno ilaa shan dukaan ayaa albaabada la iskugu dhuftay labadii maalin ee la soo dhaafay ku waasoo aanan heysan wax sharci ah oo u beneynayo in ay ku ganacsadaan.
Mid ka mid ah milkiilayaasha dukaamada la xiray oo lagu magaacaaboCcismaan Makaaraan oo warbaahinta SBC ay la xariirtay ayaa sheekay in aanan la soo wargalin xiliga la xirayay ganacsigooda isla markaana ay ku howlanaayeen sidii ay sharci u heli lahaayeen. Wali waxaa jirto cabsi kale oo ay qabaan soomaalida deegaankaas oo laga yaabo in markale la xiro goobo ganacsi oo hor leh.
Horaantii 2010-kii ayey eheed markii raaf ba’an lagula kacay soomaalida ku sugan halkaasi.
Arintane waxa ay sii xumeyneysaa yadadiilada Soomaalida ku ganacsato halkaas oo aad raju xumaa. Dhawaantan mar ay idaacadda codka Soomaalida Koonfur Africa booqatay halkaas ayaa waxa aynu kula soo kulanay Soomaali aad u madluumsan oo qatyaan ka daagan ku sii noolashaha dalkan ka dib markii ay waayeen goobohoodii ganacsi sanad ka hor.
Sadaad Ahmed Gobey
SBC International Cape Town